देउवालाई रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न : विभाग/विभाग भनेर तमाशा गर्ने बेला हो यो ? « रिपोर्टर्स नेपाल
देउवालाई रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न : विभाग/विभाग भनेर तमाशा गर्ने बेला हो यो ?
प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीभित्र विकृतिहरु देखिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि गर्नुपर्ने काम नगरेर पदहरु बाँडेर र विभागहरु गठन गरेको आरोप लगाए । उनले अहिले विभाग विभाग भनेर तमाशा गर्ने बेला नभएको पनि बताएका छन् । प्रस्तुत छ बरिष्ठ नेता पौडेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हिजो शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको बैठकमा तपाईले के भन्नुभयो ? कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
अहिले पार्टीभित्र विकृतिहरू देखिरहेको छ । यो गलत तरिकाबाट पार्टी सञ्चालन गरेर हुँदैन । जुन बेलामा जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्ने, यस्तो अनर्थ नगरौँ । क्रियाशील सदस्यताका लागि देशका लाखौँ साथीहरू इच्छुक छन् । व्यवस्थित ढंगले क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने, जिल्ला–जिल्लामा कसरी अधिवेशनको तयारी गर्न सकिन्छ । त्यतातिर सारा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा पदहरू बाँडेर, विभागहरू गठन गरेर हुन्छ ? त्यो काम महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने हो । अहिलेको संशोधित विधानमा पनि ६ महिनाभित्र सक्नैपर्ने विधान छ । क्रियाशील हुने साथीहरूले वडामा सम्पर्क राखेर आउनुपर्छ भन्ने लगायतका भातृ संस्थाको म्याद थपिएको जुन रित पुगेन । यस्तो किसिमको गर्नुभएन । क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति बनाउनुपर्छ । त्यसको संयोजक निष्पक्ष खालको सबैले मान्ने खालको बनाउनुपर्छ । जनसम्पर्क समितिहरू जथाभावी भएका छन्, तिनीहरूको नियम र विधान बनाउनुपर्छ ।
पार्टी सभापतिले महाधिवेशनको निष्पक्षतामा तपाईहरूलाई शंका नगर्न आश्वस्त पार्नुभएछ नि हिजो ?
मुखले आश्वस्त पारेर हुँदैन । व्यवहारमा आश्वस्त पार्नुपर्छ । भातृ संस्थाहरू पनि विधि विधानमा चल्नुपर्छ । सबैले आफ्नो इच्छा र मर्जीअनुसार चलाउन थालेपछि कहाँबाट विश्वासको वातावरण बन्छ ?
शेरबहादुर देउवाले विधानभन्दा बाहिर गएर क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण नगर्ने कुरा बताउनुभएको छ । तपाईलाई विश्वास छ कि छैन त्यसमा ?
अझै पनि विश्वास बनिसकेको छैन । किनभने कतिपय जिल्लाहरूमा यति सदस्य, उति सदस्य फलानो मान्छे प्रवेश गर्नुभएको हो, यहाँबाट दिने नै होइन । यहाँबाट दिइने त १५/२० जना मानिसलाई महत्वपूर्ण क्रियाशीलता यहीबाट दिने हो । अरू वडाले दिने हो । त्यहाँ वडाको बैठकमा क्रियाशील छन्, पार्टीमा आबद्ध भएर ती सबैलाई हेरेर त्यहाँको कमिटिले निर्णय गर्छ । साथीहरूलाई जिम्मा दिने हो ।
त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा विभागहरू गठन गर्न मिलेन ?
विभाग विभाग भनेर तमाशा गर्ने बेला हो यो ? विभागको के काम हुन्छ अहिले ? कुन अर्थमा मान्छेको नाममात्र अखबारमा टाँसिदिएर, साथीहरूले पनि मेरो नाम छापिएर आयो भनेर त्यसैमा मख्ख हुने बेला हो यो ? महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने अहिले हाम्रो सभापति कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा अहिले आएर मनोनितको नाम लिएर विभाग बनाउने यो सबै तमाशा होइन यो ?
अहिलेसम्म केन्द्रिय समितिमा एजेण्डा तय भएको छैन ?
भएको छैन । त्यो उहाँको सम्मान होइन । त्यो दिनमा उहाँहरूको प्रवेशका लागि मात्र त्यहाँ उपस्थित भयौँ ।
अब कांग्रेसमा आउन चाहने मान्छेहरू त उत्साहित नहुने भए नि फेरि ?
आएकाहरूलाई कांग्रेस नै सबै दिने हो त ? कांग्रेसका पुराना नेताहरूको पनि मर्यादा बचाउनुपर्छ नि । कांग्रेस पार्टीका सिनियर नेताहरूको मर्यादालाई तल पारेर उहाँहरूको सम्मान हुन्छ र ? उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने पनि त एउटा तरिका हुन्छ । जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई उचित किसिमको सम्मान दिने हो तर यहाँको साथीहरूको असम्मान, अपमान नहुने गरी दिने हो ।
शेरबहादुर देउवा र तपाईको मिलेमत्तो छ भन्ने आएको छ, गोविन्दराज जोशी र पुष्करनाथ ओझालाई हटाउनमा ?
यो मिलेमत्तो पार्ने गरेर षड्यन्त्र हो यो । यो सौदाबाजी गरेर पुष्कर ओझामाथि प्रतिशोध अहिलेसम्म साँचेर राखेर षड्यन्त्र गरियो । यो गलत कार्य भयो ।
त्यसो भए पुष्करनाथ ओझालाई कारबाही हुनुहुन्न भन्ने तपाईको भनाई हो ?
पुष्करनाथ ओझा जस्तालाई कारबाही गर्ने भनेको उनको के हो दोष ? त्यहीअनुसार हुनुप¥यो नि । यहाँ ल्याएर बाहिर मिसाउने हो ?
त्यसो भए कांग्रेसमा अनुशासनमा कारबाही गर्दाखेरि पनि भागबण्डा हुने भयो अब ?
भागबण्डा होइन । त्यो गलत कुरा हो । त्यही प्रक्रियाको षड्यन्त्र हो भन्छु म ।
अहिले देशमा कोरोनाको संक्रमण छ । देश संकटमा गईरहेको छ । दलहरू मारामार गर्ने ? तपाईहरू झगडा गर्ने बेला हो र यो ?
यो झगडा होइन । यो पार्टीलाई शुद्ध बनाएर कम्युनिष्टसँग लड्ने, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने काम गर्न कांग्रेस बनाउने हो । कांग्रेसलाई सशक्त कांग्रेस बनाउने अभियान छ अहिले ।
तर कांग्रेसले पनि अहिले जनताको समस्यामा ध्यान दिएन । जनता रोइरहेका छन्, खान पाएका छैनन् । तपाईहरुलाई दुःख लाग्दैन् ?
जनताको समस्यालाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले आफैले भेटेको छु । अहिले जो अनशनमा बसे, तिनीहरूको माग पनि मैले प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेको छु । यसरी पि.सि.आर परीक्षणको दायरा बढाउनुप¥यो, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन राम्रो बनाउनुप¥यो, भेन्टिलेटरहरू प्रशस्त बनाउनुप¥यो, विरामीहरू राख्ने इमरजेन्सी वार्डहरू राम्रो हुनुप¥यो, यो सारा कुराको व्यवस्था सरकारले यत्रो समय पाउँदा के हेरेर बसिराखेको छ । गाउँमा गरिबी छ, तिनलाई त्यही रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुप¥यो । राज्यको बजेट त्यतातिर एलोकेट गर्नुप¥यो । हामीले सरकारलाई समयमा नै उचित सुझाव दिएका छौँ । गर्ने त उसले हो नि त । अब सरकारले गर्दैन भने त्यसकोविरुद्ध हामीले जनतालाई भन्ने हो । बेइमानी ग¥यो सरकारले, दायित्व पूरा गरेन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । तस्करलाई कमिशनमा लगानीबोर्डमा ल्याएर हाल्छ । सरकारको काम गराई हेर्नुहोस् त ? यस्तै हुन्छ कम्युनिष्ट ?
२० दिनदेखि आमरन अनशनमा युवाहरू छन् । उनीहरूले भनेका छन्, हाम्रो माग सुनेन सरकारले । अब के गर्ने त, अनशन बस्न दिइरहने कि माग सम्बोधन गर्ने त ?
सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरूको जीवनमाथि खतरा पु¥याउनु हुँदैन । मैले तत्काल यहाँबाट फोन गरेर भनेको छु ।
जनताको पीडामा देशका शीर्ष नेताहरू किन गम्भीर हुँदैनन् ?
अहिले हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ । देशलाई कसरी संकटबाट मुक्त गर्ने ? कसरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ? कुन रूपमा देश चलाउनुपर्छ ? हामी निरन्तर सरकारलाई पथप्रदर्शन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । जनतालाई पनि हामीले भनिराखेका छौँ । सबै किसिमले हामी त चुप लागेर बसेकै छैनौँ ।
देशव्यापी लकडाउन नगर्ने पक्षमा सरकार छ । कांग्रेसको माग के हो ? लकडाउन गर्ने कि नगर्ने ?
लकडाउनभन्दा सबैभन्दा संयमित व्यवहार गर्नुप¥यो । जोगिएर काम गर्नुप¥यो । देशको अर्थतन्त्रलाई चौपट पार्न पनि त भएन ।
त्यसो भए लकडाउनको आवश्यकता अहिले छैन ?
होइन अहिले लहडाउन नै भनिदिएँ पनि समाधान कहाँबाट हुन्छ । अर्कातिर राष्ट्रिय समस्या, अर्थतन्त्रमा ठुलो विचलन आउन सक्छ । पहिलो कुरा सन्तुलन गरेर चलाउनुप¥यो नि ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नहुने भएछ होइन फागुनमा ? पार्टी सभापति गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न अरे ?
किन हुँदैन ? नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर अब सारा साथीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिइसक्नेबित्तिकै १ महिनाभित्र सबै चुनाव सकिन्छ । अधिवेशन के गा¥हो छ र ?
तर पार्टी सभापतिको भित्री रणनीति र उद्देश्य त तपाईले बुझ्नुभएको छ ? उहाँ त फागुन ७ मा महाधिवेशन नगर्ने पक्षमा उभिनुभएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ? के भन्नुहुन्छ ?
त्यसो गर्न मिल्दैन । १ वर्षको अवधि सकिन्छ फागुनमा, अवधि सकिएपछि के हुन्छ ? कांग्रेसको विधानको दशा के हुन्छ ? हाम्रो पार्टीको विधानको मर्यादालाई भंग गरिदिएपछि पार्टी कहाँ रहन्छ ?
तर पार्टी सभापतिको भनाई के छ भन्दाखेरि ६ महिना थप्न सकिन्छ ?
६ महिना उहाँले कहाँबाट थप्न पाउनुहुन्छ ? विधानमा थप्न पाउने १ वर्ष हो । त्यो १ वर्ष सकिसक्यो ।
त्यसोभए ६ महिना महाधिवेशन थप्न पाउने सम्भावना छैन ?
छैन छैन । कहीँ थप्न पाउने व्यवस्था नै छैन । अधिकतम १ वर्ष थप्ने भनेर भनिएको थियो । त्यो १ वर्ष त यो फागुनमा पूरा हुन्छ ।
तपाईले भन्नुभएको थियो, हाम्रो गुटबाट यसपालि १ जना मात्र सभापतिको उम्मेदवार बन्छ, के यो सही हो ?
हो १ जना मात्र हुन्छ । हामी देशलाई एउटा गतिलो विकल्प दिन चाहन्छौँ । नेपाली जनताको गरिबी र विपन्नता, कष्टकर जीवनलाई राहत दिन सक्ने कांग्रेस निर्माण गर्न चाहन्छौँ । अहिलेको कम्युनिष्टले सत्ता सञ्चालन गर्न सकेन । विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सकेन । त्यो विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने क्षमता भएको कांग्रेस, निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय दिने कांग्रेस हामी दिन चाहन्छौँ । उनीहरूले गर्न सकेनन् । अब कांग्रेसले गर्न सक्छ भन्ने कुरासहित हामी जनतामा प्रस्तुत हुन चाहन्छौँ । यो महाधिवेशनले त्यस्तै कांग्रेस बनाउने हो ।
कृष्णप्रसाद सिटौलासँग तपाईहरूको कुरा भएको छ कि छैन । उहाँ त शेरबहादुर देउवाको गुटमा जानुभयो अरे ?
नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास राख्ने सबै साथीहरूसँग मेरो कुरा हुन्छ । कृष्णप्रसाद सिटौला मात्र हो र, शेरबहादुर देउवासँग पनि मेरो कुरा हुन्छ । हिजो आन्दोलनमा सबै सँगै लागेका साथीहरू हुन् । सबैलाई लिएर काम गर्ने हो ।
‘पौडेल पक्षको विरोधपत्र केही पनि होईन, उहाँले मनमा लागेका कुरा साथीहरूको सहमतिमा लेखाउनुभएको छ’ : विश्वकर्मा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र
वामदेवविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलाशले के गर्ला ?
काठमाडौं, १४ असोज । राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद बामदेव गौतमविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलाशले किनारा लगाउने
‘अहिले राम्रो रिजल्ट दिनसक्ने मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ भन्ने त सबैको माग हो नि’ : दाहाल
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले पार्टीभित्र सबै कुरा राम्रो
विश्वभर ३ करोड ३८ लाख कोरोना संक्रमितमध्ये साँढे दुई करोड संक्रमणमुक्त
काठमाडौं, १४ असोज । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या ३ करोड ३८ लाख नाघेको छ
नेपालको ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने कोरोनाविरुद्धको रुसी भ्याक्सिन ल्याउने सम्झौता
काठमाडौं, १३ असोज । विश्वको पहिलो कोभिड-१९ भ्याक्सिन नेपालमा आउने बाटो खुलेको छ । रुसी
कोरोना भाइरसविरुद्वको ९ प्रकारका भ्याक्सिन २०२१ को शुरुमा प्रयोगमा आउने
प्रभात सिंहः सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनाबाट मानव जातिलाई नै संकटमा पारेको कोरोना भाइरस अझपनि
आज १५१३ कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं, १३ असोज। नेपालमा कोरोना भाइरसका आज १५ सय १३ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
२१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
वीरगंज, १४ असोज । पर्सा, बारा, मकवानपुर र रामेछापका २१ जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण
सुनचाँदीको मुल्य फेरि उकालो लाग्दै
काठमाडौं, १४ असोज । आज नेपाली बजारमा सुनको मुल्य बृद्धि भएको छ । बुधवार तोलामा